स्यानीटरी प्याड निःशुल्क माग
Share : 439
घोराही । पुरुषको आवश्यकतासँग जोडिएको कण्डम निःशुल्क हुने तर, महिलाका लागि नभै नहुने स्यानिटरी प्याड किन निःशुल्क नहुने ? पछिल्लो समय यो विषयले चर्चा पाएको छ । धेरैजसो अधिकारकर्मी तथा नारी समानताका कुरा गर्दैआएका सङ्घसंस्थाले यो विषयलाई महत्वका साथ उठाइरहेका छन् ।
दाङको ग्रामीण क्षेत्रमा पर्ने एउटा विद्यालयमा आयोजित सचेतना कार्यक्रमका एक किशोरीले जुरुक्क उठेर भनिन् –‘बजारमा कसैले बार्दैनन् । गाउँमा हाम्ले मात्रै किन बार्ने ?’ घोराहीकी सामाजिक अभियन्ताकी ११ वर्षीया छोरी पहिलोपटक महिनावारी भइन् । कक्षा ५ मा पढ्दै गरेकी उनलाई महिनावारी के हो थाहा थिएन । न विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश थियो, न परिवारमा यसबारे कसैले कुरा गरेको उनले सुन्न पाइन् । साथीहरुले यसबारे चर्चा गरेको उनलाई थाहा थिएन । महिनावारी हुने बित्तिकै ती बालिका डरले चिच्याउँदै रोएकी ती अभियन्ताले सुनाइन् ।
अधिकाँशलाई किशोरीलाई महिनावारी हुँदा त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने ज्ञान हुँदैन । महिनावारी हुँदा स्यानिटरी प्याड कहाँ पाइन्छ ? कति मूल्य पर्छ ? कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ ? किन गर्नुपर्छ ? भन्ने कुरा हुर्कंदै गरेका किशोरीहरुलाई खासै थाहा हुँदैन । महिनावारीको समय पुगेका बालिकालाई परिवारको साथ, सहयोग र ढाढसको आवश्यकता पर्दछ । यसबारे स्थानीय तहमै सरकारी स्तरबाट समेत अभियान चलाउनुपर्ने खाँचो छ ।
मनोविमर्शकर्ता सुशीला आचार्यका अनुसार शारीरिक परिवर्तन हुँदै गरेको देखेर अलमलमा रहेका किशोरीहरुमा एकैपटक महिनावारी बेहोर्नु पर्दा एक प्रकारको त्रास सिर्जना हुन्छ । त्यसमाथि परिवारले छोइछिटो गर्दा उनीहरु मानसिक एवं सामाजिक रुपमा कमजोर महशुस गर्न पुग्छन् ।
‘किशोरीहरुले शरीरमा आएका परिवर्तनका कारण एक्लै बस्न मन गर्ने र भावनात्मक रुपले कमजोर महशुस गर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘शरीरमा भएका परिवर्तनलाई सहज रुपले ग्रहण गर्न सक्ने वातावरण परिवारले दिनुपर्छ । अनि मात्र किशोरीको आत्मबल बढ्छ ।’ यस्तो समयमा छुट्टै बसाल्ने र छोइछिटो गर्ने परिपाटी नै गलत भएको उनी ठान्छन् । परिवारसँगसगै विद्यालयका शिक्षक, साथीहरु र समाजको सकारात्मक व्यवहार पनि किशोरीहरुलाई आवश्यक पर्छ ।
विद्यालयमा पढ्दै गरेका किशोरीहरुलाई विशेष गरी महिनावारीको समयमा आवश्यक पर्ने स्यानिटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पकेट खर्च नहुने किशोरीहरुले कसरी किन्न सक्छन् यति महङ्गो स्यानिटरी प्याड ?’ उनी भन्छन्, ‘महिलाको स्वास्थ्य सुरक्षाको दृष्टिले पनि स्यानिटरी प्याडलाई सर्वसुलभ बनाइनुपर्छ ।’
महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेको संस्था ओरेक नेपालले निशुल्क स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउने अभियान नै सञ्चालन गरेको छ । ओरेकले अहिले जिल्लाका २० वटा सामुदायिक विद्यालयमा प्याड निःशुल्क वितरणको काम थालेको छ ।
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ओरेकले अहिले घोराही उपमहानगरपालिकाका तीन वटा विद्यालय, तुलसीपुर उपमहानगरका ११ वटा, दंगिशरण गाउँपालिकाका चार वटा र शान्तिनगर गाउँपालिकाका दुई वटा सामुदायिक विद्यालयमा यो अभियान थालेको हो ।